Askarta AMISOM ee lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadii 2007 oo la shaaciyay – Somali Top News
Askarta AMISOM ee lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadii 2007 oo la shaaciyay
September 12, 2019 September 12, 2019 Somali Top News	0 Comments Askarta AMISOM ee lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadii 2007 oo la shaaciyay
Bare sare Paul Williams oo wax ka dhiga Jaamacad ku taalla Mareykanka ayaa warbixin ka diyaariyay khasaaraha Ciidamada AMISOM ka soo gaaray Soomaaliya tan iyo markii uu howlgalka billowday.
Warbixinta Paul Williams, waxaa uu ku sheegay in meelo badan oo uu wax ka qiimeeyay, ilo ilaa shan gaaraya oo uu xigasho ka sameeyay iyo dukumiintiyada lacagaha magdhowga ah ee AMISOM oo uu qaarkood arkay ay muujiyeen dhimashada ilaa 1,800 Askari,hayeeshee waxaa uu warbixintiisa ku sheegay inxitada intaas aad uga badantahay.
Waxaa uu soo xigtay darbiga Midowga Afrika ee Xaruntiisa Adis Ababa oo ay ku dhegganyihiin liiska magacyada iyo darajada Ciidanka AMISOM ee ku dhintay dagaalka ka dhanka ah AL-shabaab.
Waxaa kale oo uu soo xiganayaa warbixinnada la xiriira lacagaha magdhowga taas oo ay dheertahay in dowladaha qaar sida Kenya aysan muujin lacagaha magdhowga ah ee la siiyay.
Warbixintan oo uu ku soo bandhigay Mac-hadka caalamiga ah ee Nabadda oo uu fadhigiisu yahay magaalada New York ee dalka Mareykanka ayuu dowladaha AMISOM ku jira ku eedeeyay in aysan khasaaraha askartooda soo gaarta la wadaagin Warbaahinta,kaliyana la qaato warbixinnada ay AL-shabaab ka sheegtaan taas oo uu sheegay in ay tahay siyaasad xun.
Warbixin uu soo saaray Midowga Afrika islamarkaana u dhaxeysa 2014 ilaa 2018 ayaa waxaa ay muujineysaa magdhowga la siiyay Ciidamada AMISOM ee xilligaas dhintay ama dhaawacmay,waxaana lacagta ay gaareysaa $74.6Milyan oo doollarka Mareykanka ah, 79% lacagtaas waxaa ay ku baxday magdhowga kuwa dhintay halka 21% ku baxday kuwa dhaawacmay.
Askarta xilligaas waxyeellada soo gaartay ayey warbixinta ku tilmaantay 1,179 Askari oo Magdhow dhimasho ah la siiyay iyo 1,567 Askari oo magdhow dhaawac ah la siiyay.
Xarunta Midowga Afrika ee Adis ababa darbigeeda waxaa suran Askarta Midowga Afrika uga dhimatay howlgallada Burundi, Jamhuuriyadda Afrikada dhexe, Sudan iyoSomalia.
Darbigaas kuma xusna magacyada iyo darajada Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee ku dhintay gudaha dalka hayeeshee waxaa kaliya ku qoran; ” Xusuusta Saraakiisha Ragga iyo Dumarka leh ee Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyo Askarta Xoogga dalka Soomaaliya ee noloshooda ku waayay ay nabad iyo xasilooni ugu soo celiyaan Soomaaliya”.
Isha: Prof Williams & IPI
← Dowladda Soomaaliya oo hakisay bixinta qabashada codsiyada baasaboorka cusub
Qarax ka dhacay dagmada Diinsoor iyo khasaaro ka dhashay →
Xil. Mahad Salaad oo kashifay sababta aan mushaarka loo siin ciidamada xoogga dalka
Faroole: Farmaajo waa loo heshiin doonaa hadduusan sameyn dib u heshiisiin
Soomaaliya oo guulo kasoo hoyisay Shir-weynaha Isgaarsiinta Adduunka